Ampamoaka amin’ny Kitra Malagasy : vaky ny ady eo amin’i Abel Anicet sy ny federasiona | NewsMada
Ampamoaka amin’ny Kitra Malagasy : vaky ny ady eo amin’i Abel Anicet sy ny federasiona
Miteraka resabe eo anivon’ny tontolon’ny baolina kitra malagasy ilay fanakianana mivaivay nataon’Andriamanantena Abel Anicet, mpilalao mpila ravinahitra any ivelany, ireo mpitantana eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), mikasika ny fitantanana ny Barea de Madagascar. Vaky ny ady eo amin’ny roa tonta.
Taorian’i Lalaina Nomenjanahary (Bolida), nitondra fanakianana mavaivay ho an’ny federasiona malagasy (FMF), momba ny Barea koa i Andrianantenaina Abel Anicet, mpilalao mila ravinahitra any amin’ny klioban’ny Ludogoretz, Bolgaria. Tsy nanaiky ny hanatevina ny ekipam-pirenena ny tenany amin’ny fihaonana hikatrohana amin’i Sao Tomé, eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny “Can 2019”.
Nanaovany fanambarana ren-tany, ren-danitra tamin’ny tambajotra-tserasera izany, ka namakiany ny vay mankarary ny baolina eto amintsika, toy ny tsy firaharahian’ny federasiona ireo mpilalao ao anatin’ny Barea. “Ekipa hiatrika lalao goavana ve hampatoriana amin’ny efitra kely, iarahan’ny mpilalao 7 na 8. Ny sasany matory amin’ny tany ary ny fandriana “superpose” mihozongozona vao mihetsika ireo matory ao ambony”, hoy izy.
Nomarihiny fa tsy vitan’ny federasiona ny mampatory azy ireo, any amin’ny hotely toy ny ekipam-pirenena rehetra hiatrika fifaninanana goavana sy manan-danja. Nambarany fa tena malahelo noho io trangan-javatra io ny tenany. “Tsy miseho milay na mitady vola aho raha milaza izao zavatra tsy mety izao fa tokony homena ny lanjany sy fampirisihana ny mpilalao. Porofon’izany, nozaraiko tamin’ireo mpilalao eto Madagasikara ny tambiny (prime) nomena ahy… Ampy ahy ny tambiny raisiko aty ”, hoy izy.
Nomarihiny fa vavolombelon’izany, ny tale teknika nasionaly fa tsy nitady vola velively izy, raha niresaka taminy, momba ny tsy hilalaovany ao amin’ny Barea.
Fantatro ny vola omen’ny Fifa
Tsy nanafina ihany koa i Abel Anicet, fa mahafantatra ny vola omen’ny federasiona iraisam-pirenena ny federasiona tsirairay,ka tsy tokony ho lany raha hanomezana fampirisihana ireo mpilalao ao anatin’ny Barea izany. “Raha omena 2 tapitrisa Ar tsirairay na latsak’izany ireo mpilalao, tena afaka manome vokatra tsara ary miady mafy mihitsy”, hoy izy.
Manoloana izany, nilaza Rakotomalala Stanislas, sekretera jeneralin’ny federasiona fa tsy tokony hanao resabe amin’iny i Abel Anicet, rehefa tsy te-hilalao ao amin’ny Barea fa maka ny andraikitra tandrify azy fotsiny. “Miankina amin’ny fahafaha-manao ny zavatra rehetra. Noho izany, tsy mbola afaka ny hilaza aho na hisy izany na tsia”, hoy izy.
Marihina fa iray andro mialoha ny hanatanterahana ny fifidianana ny ho filohan’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), ity olana eo amn’i Abel Anicet sy ny FMF, ity. Kandidà ho amin’izany toerana izany, i Ahmad, filohan’ny FMF, ka asa raha mety misy ambadika momba izany izao fanambaran’i Abel Anicet izao na tsia.
Une réponse à "Ampamoaka amin’ny Kitra Malagasy : vaky ny ady eo amin’i Abel Anicet sy ny federasiona"
Arison 15/03/2017 à 19:34
tsy dia zava-baovao eto amin’ ny tanin’ ny malagasy ny fitsetsefana ny madinika toy izao